XOG HOOSE: Deni oo magacaabaya Agaasimayaal guud iyo Wasiiradda qaarkood oo dibu eegis lagu sameynayo.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lafilayaa in uu sadexda maalmood ee nagu soo aadan soo magacaabo Agaasimayaasha guud ee Hay`addaha madaxa banaan iyo wasaaraddaha Xukuumadiisa, ka dib 8 bilood oo uu hayo xukunka Madaxweyne-nimada ee mandiqadaas.
Tartan iyo kala jiidasho boosaska Agaasimayaasha guud ah oo habeenadii u dambeeyey ka socday magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa gaaray halkii ugu sareysay, waxaana dhinacyada kala duwan ee beeluhu ay doonayaan wasaaraddaha ugu fiican.
Beelaha ayaa kasokow saameyntooda, haddana Madaxweynaha Puntland ayaa doonaya in wasaaraddaha iyo Hay`addaha madax banaan ay noqdaan kuwa shaqeeya, iyadoo uu horey u sheegay in uu xooga saari doono sidii ay Agaasimayaasha uud u noqon ahaayeen dad aqoon iyo karti lagu soo xulay.
Nidaamka awood qeybsiga beelaha Puntland ayaa aad looga cabanayay mudooyinkii u dambeeyey, waxaana lagu eedaynayaa beelaha waa weyn in ay inta badan sameeyeen Sad-bursi ayna wali sii doonayaan sidii ay u sii badsan lahaayeen.
Magacaabida laga filayo Madaxweynaha Puntland, ka sokow warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhamaadka bisha August ay dhici karto in dibu eegis lagu sameeyo xubnaha golaha wasiiradda, gaar ahaana wasaaraddaha qaarkood.
Warbaahinta Puntlandtimes.com waxay ogaatay musuqmaasuq baahsan oo ay ku kaceen afar kamid ah xubnaha golaha wasiiradda, taas oo aan dhawaan baahin doono, waxaana wasiiraddan qaarkood ka muuqda lunsashada goor horeba lacag gaaraya boqolaal kun oo dollar oo loogu talogalay mashaariicda horumarinta Puntland.